Guddiga amniga golaha shacabka oo maanta su’aalo weydiiyay wasiirka amniga – Kalfadhi
Guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee golaha shacabka ayaa kulan ku saabsan xaaladda amni ee dalka la yeeshey, warbixinna kaga dhegeystey,wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Abuukr Isloow Ducaale iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada qalabka sida.
Wasiirka amniga ayaa warbixin ku saabsan xaaladda guud ee amniga dalka ka siiyey gudiga arrimaha gudaha iyo amniga ee Golaha Shacabka isagoona sidoo kale faafaahin buuxda ka bixiyey xaaladda amniga Muqdishso iyo dalka guud ahaan.
Wasiirka ayaa sheegey iney jiraan guulo badan oo laga gaarey dhinaca nabad geliyada isla markaana ay ka go’an tahay sidii loo dardargelin lahaa xoojinta amniga guud ahaan dalka.
Kulanka ayaa waxa shir guddoomineysey guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee golaha shacabka xidhibaan Fowsiya Maxamed Sheekh, waxaana diiradda lagu saarey wada shaqeyn iyo iskaashi dhexmara hay’addaha amniga ka shaqeeya iyo guddiga arrimaha gudaha iyo amniga si loo xaqiijiyo sugidda amniga dalka.
Ra’iisul wasaare Khayre oo soo dhameystiray xubno ka maqnaa golahiisa wasiirada